Nhau - Do Filtered Pipette Matipi Anonyatso Kudzivirira Kuyambuka-Kusvibisa uye Aerosols?
Yakadzika Well Plate
Thermometer Probe Chivharo
Nzeve Otoscope Specula
Ko Filtered Pipette Matipi Chaizvo Anodzivirira Muchinjikwa-Kusvibisa uye Aerosols?
Mune rabhoritari, sarudzo dzakaomarara dzinoitwa nguva nenguva kuti dzione kuti ndedzipi dzakanakisa dzekuitisa kuyedza kwakakosha uye kuyedza. Nekufamba kwenguva, matipi epipette akachinjika kuti aenderane nemarabhasi pasirese uye nekupa maturusi kuti mahunyanzvi uye vesaenzi vakwanise kuita tsvakiridzo yakakosha. Izvi zvinonyanya kuitika sezvo COVID-19 iri kuramba ichipararira muUnited States. Epidemiologists uye virologist vari kushanda kutenderera nguva kuti vauye nemushonga wehutachiona. Filtered pipette matipi akagadzirwa epurasitiki anoshandiswa kuongorora hutachiona uye iyo yainge yakawanda, girazi mapipette ikozvino akareruka uye otomatiki. Matipi gumi epurasitiki epipette matipi anoshandiswa kuita bvunzo imwe yeCOVID-19 parizvino uye mazhinji emazano anoshandiswa izvozvi ane firita mavari iyo inofanirwa kuvharira zana muzana maaerosols uye kudzivirira kusvibiswa kwemuchinjikwa pakutora sampling. Asi zvakadii izvi zvakadzama zvinodhura uye zvakatipoteredza matipi anodhura anonyatso kubatsira marabhorotari nenyika? Ma Labs anofanirwa here kusarudza kudzikisa firita?
Zvichienderana nekuyedza kana kuyedza kuri padyo, marabhoritari nenzvimbo dzekutsvagisa vanosarudza kushandisa matipi-asina kusefa kana akasvinwa mapipette matipi. Mazhinji marabhu anoshandisa matipi akasvinwa nekuti ivo vanotenda kuti mafirita anodzivirira maaerosols ese kusvibisa sampuro. Mafirita anowanzoonekwa senzira inodhura-yekubvisa zvachose zvisaririra kubva kune imwe sampuro, asi zvinosuwisa kuti izvi hazvisizvo. Polyethylene pipette matipi mafirita haatadzise kusvibiswa, asi panzvimbo pezvo inongodzora kupararira kwehutachiona.
Chinyorwa chazvino chaBiotix chinoti, “[izwi] chipingamupinyi chingori chirevo chisina kufanira kune mamwe emazano aya. Chete mamwe matipi epamusoro-ekupedzisira anopa yechokwadi chisimbiso chinodzivirira. Mafirita mazhinji anongodzora mvura kuti isapinda mubhavhu repombi. ” Zvidzidzo zvakazvimirira zvakaitwa zvichitarisa dzimwe nzira dzekuisa mafirita uye kushanda kwawo zvichienzaniswa neasina-firita matipi. Chinyorwa chakaburitswa muJenali yeApplied Microbiology, London (1999) chakadzidza kushanda kwe polyethylene firipi matipi painoiswa kumagumo kwepipette tip koni kuvhurwa kana ichienzaniswa neasina kusefa matipi. Kunze kweye 2620 bvunzo, 20% yemasampula yakaratidza kusvibiswa kwekarori pipipetor mhino pakange pasina firita yaishandiswa, uye 14% yemasampuli akange akasvibiswa-yakasangana apo polyethylene (PE) firipi tip yakashandiswa (Mufananidzo 2). Chidzidzo chacho chakawana zvakare kuti kana mvura ine radioactive kana plasmid DNA yakaiswa pombi usingashandise firita, kusvibiswa kwepombi yemutopota kwakaitika mukati mezana repombi. Izvi zvinoratidza kuti kunyangwe iwo akasvinwa matipi achideredza huwandu hwekusangana-kwepamberi kubva kune imwe pipette tip kune imwe, mafirita haamise kusvibiswa zvachose.
Post nguva: Aug-24-2020
Kubudikidza nekuedza kutsungirira mumakore mashoma apfuura, ACE yakakura kuva mumwe wevanotungamira vanogadzira uye vatengesi vezvinoshandiswa murabhoritari uye zvekurapa Ticharamba tichivimbisa vatengi vedu nezvakanakisa zvigadzirwa nemasevhisi.
Suzhou ACE anorapa achishandisa mitemo Technology Co., Ltd.